दशैंदेखि छटसम्म प्लेन चढ्दा १० प्रतिशत छुट ! - Jhilko
दशैंदेखि छटसम्म प्लेन चढ्दा १० प्रतिशत छुट !
१ भदौ,२०७६ 71 0
नियमित उडान सञ्चालन गर्ने सदस्य वायुसेवा कम्पनीले काउन्टरबाटै टिकट खरीद गरे समान्य हवाई भाडा मूल्यमा यात्रुलाई १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको सङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विमानस्थल कर र इन्धनको मूल्यमा बाहेक वायुसेवा कम्पनीले लिने सामान्य भाडामा यस्तो छुट दिन लागिएको हो । वायुसेवा कम्पनीले पछिल्लो समय धमाधम जहाज भित्र्याइरहेकाले आवश्यकताअनुसार हवाई टिकट उपलब्ध हुने कम्पनीको दाबी छ ।
आन्तरिक उडान गर्ने ठूला कम्पनी बुद्धएयर, यती एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्स लगायतले क्रमशः जहाज थपेका छन् । बुद्धले शनिबार मात्रै जहाज थपेर सङ्ख्या १३ पु¥याएको छ । यती एयरलाइन्सले दुई साताअघि एटिआर जहाज भित्र्याएको थियो । श्रीले पनि हालै जहाज थपेको छ । सीताएयरले थप जहाज ल्याउने तयारी गरेको छ ।
३ चैत्र,२०७५0325
३ बैशाख,२०७६0295
कमिशन र लोभको चक्करले एकातिर विकासे काम अगाडी बढ्न सकेको छैन भने अर्को तालुकदार...
५ फाल्गुन,२०७५0244
शेयर बजार सुस्ताउँदा खरिदबिक्रीमा तेजी
५ श्रावण,२०७६0112
साताको अन्तिमदिन बिहिबार नेप्से सामान्य अंकले घटेपनि कारोबार रकम उच्च देखिएबाट सस्तोमा...